DHALASHO WACAN Lionel Messi… (Wax ka ogow toddobo rikoor oo gaar u ah kabtanka Barcelona iyo Argentina) – Gool FM
DHALASHO WACAN Lionel Messi… (Wax ka ogow toddobo rikoor oo gaar u ah kabtanka Barcelona iyo Argentina)
(Barcelona) 24 Juun 2020. Maanta oo kale sanadkii 1987 waxaa dunida ku soo biiray ciyaaryahanka u dhashay dalka Argentina oo lagu magacaabo Lionel Andrés Messi Cuccittini, kaasoo xirfaddiisa heerk sare oo dhan u ciyaaray kooxda Barcelona.
Waxaa hadda dadka qaar ay ku doodaan inuu yahay xiddigii ugu weynaa taariikhda kubadda cagta oo dhan, iskaba daa Barca ama La Liga, iyagoo cuskanaya tirada inta jeer ee uu ku guuleystay laacibka ugu wanaagsan dunida.
Maadaama ay maantam ku beegan tahay sanad guuradii 33-aad ee ka soo wareegtay dhalashadiisa, waxaana idin la wadaageynaa rikoorro gaar ah Messi oo kubadda cagta ka sameeyay.
Waa ciyaaryahanka ugu goolasha badan La Liga, misena ugu saddexley dhaliska badan
Waxaa jira illaa sagaal ciyaaryahan oo wax ka badan 200 gool ka dhaliyay La Liga, balse labo ciyaaryahan oo qura ayaa dhaliyay wax ka badan 300 gool, halka Messi oo qura uu ka La Liga ka dhaliyay wax ka badan 400.
Messi ayaa dhaliyay 440 oo La Liga ah kaddib 477 kulan oo uu ciyaaray.
Messi ayaa heysta rikoorka xiddiga dhaliyay goolasha ugu badan hal sano
Kabtanka Barcelona ayaa sanadkii 2012 waxa uu shabaqa dul dhigay 91 gool, oo ay 79 ka mid ah yihiin kuwa uu Barca u dhaliyay, halka 12 goolna uu u dhaliyay qarankiisa Argentina.
79-ka goool oo uu Barcelona u dhaliyay Messi waxa uu ka kala dhaliyay 59 LaLiga, 13 waxa uu ka dhaliyay Champions League, 5 ayuu ka dhaliyay Copa del Rey halka 2 gool uu ka dhaliyay Spanish Super Cup.
Waxa uu heystaa tirada ugu badan ee abaalmarinnada Ballon d’Or iyo European Golden Boots
Lionel Messi ayaa hoggaanka ku haya ku guuleysiga labadan abaalmarin oo ka mid ah abaalmarinnada ugu qaalisan kubadda cagta ee ay ciyaartoyda qaadaan.
Messi ayaa lix jeer oo kala duwan ku guuleystay Ballon d’Or, waxaana afar isku xigta uu qaaday intii u dhexeysay 2009 illaa 2012, halka uu shaneystay 2015, waxaana uu markii lixaad qaaday abaalmarinta kubadda dahabka sanadkii hore.
Si taas la mid ah, laacibkan ayaa heysta lix jeer abaalmarinta Kabta Dahabka ee la guddoonsiiyo ciyaaryahanka ugu goolasha shanta horyaal ee ugu waaweyn qaaradda Yurub, inkastoo uu xilli ciyaareedkan booska lixaad kaga jiro kala sarraynta loollanka kabta dahabka.
Goolasha ugu badan ee hal xilli ciyaareed laga dhaliyay La Liga
Xilli ciyaareedkii 2011-12 ayuu kabtanka Argentina dhaliyay 50 gool oo horyaalka dalka Spain ah, isagoo saftay 37 kulan, waxaana uu hantay abaalmarinta Pichichi trophy ee gooldhalinta La Liga, waana rikoor aan wali la jabin, inkastoo kooxda Real Madrid ay La Liga ku guuleysigiisa ku garaacday Barcelona.
Waa xiddiga goolasha ugu badan ka dhaliyay wareegga group-yada iyo marxaladda 16-ka ee tartanka Champions League, & saddexleyda ugu badan ee tartanka horyaallada Yurub
Messi ayaa wareegga group-yada Champions League ka dhaliyay 68 gool, halka wareegga 16-ka uu ka dhaliyay 26 gool.
Xiddigan ayaa sidoo kale Cristiano Ronaldo la wadaago rikoorka saddexleyda ugu badan ee Champions League, waxaana ay dhaliyeen min siddeed jeer.
Waa ciyaaryahanka koobabka ugu badan la qaaday Barcelona
Messi ayaa 34 koob la qaaday Barca, waxaana koobabkaas ay kala yihiin 10 La Liga, afar UEFA Champions League, lix Copas del Rey, lix Supercopas de España, saddex FIFA Club World Cups iyo saddex UEFA Super Cups.
Ajinabiga ugu hanashada badan La Liga
Messi ayaa labo horyaal u jira inuu noqda xiddiga heysta tirada ugu badan ee hanashada La Liga, iyadoo hadda uu rikoorkaas heysto Pacco Gento oo 12 jeer la qaaday Real Madrid.
In Messi uu heysto 10 jeer horyaalka La Liga waxay ka dhigtay inuu yahay ajinabiga ugu hanashada badan horyaalka dalka Spain.
Goorma ayuu Alexis Sanchez dib ugu soo laabanayaa Kooxda Manchester United?